Gudoomiyaha Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac oo ka warbixiyay hawl-galadii ugu danbeeyay ee ay ka fuliyeen gobolka. – Radio Daljir
Seteembar 25, 2012 4:44 b 0
Gaalkacyo, Sep 25- Gudoomiyaha gobolka Mudug oo maanta waraysi siinayay Radio daljir ayaa ka warbixiyay hawl-galladii ugu danbeeyay ee ay ka fuliyeen magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada ku xeeran.
Maxamed Yuusuf Jaamac (Tigey) Gudoomiyaha Mudug ayaa sheegay in gobolka ay ka socdaan hawl-gallo loogu magac daray Mudug Shalay iyo maanta ayaa waraysigiisa ku sheegay inay hada wax badan iska badaleen arimaha amniga iyo hormarinta, isla markaana ay socdaan mashaariic hor-marineed oo qayb ay ka yihiin furida waddooyin cusub iyo bur-burinta goobaha sharci-daradaa.
Tigey ayaa tilmaamay inay maalmihii la soo dhaafay sidoo kale hawl-galadooda ay ku fideen deegaanada ka baxsan Gaalkacyo oo ay gaareen ciidamao si ay halkaasi oga soo fuliyaan hawl-gallo amni iyo bur-burinta waxyaabaha wax u dhimaya anshaxa oo ay ka mid yihiin maan-dooriyaha.
Gudoomiyaha Mudug ayaa ammaanay hab-dhaqanka ciidanka gobolka kuwaasoo uu ku tilmaamay inay wax badan ka badaleen qaab-hawleedkoodii, waxaana uu sidoo kale ballaan qaaday inay magaalada sii joogi doonaan ciidankii uu hogaaminayay taliye-xigeenkii ciidanka booliska Puntland Col; Muxiyadiin Axmed Muuse kuwaasoo hawl-gal baaxad weyn ka fuliyay magaalada labadii bilood ee la soo dhaafay.
Amniga Gaalkacyo ayaa wax badan iska badalay tan iyo markii gobolka ay yimaadeen ciidan ka socda Puntland, ka gadaal markii ay dhaceen falal ay dawladdu indhaha ka qarsan wayday.